RV newsletter: Fandraketam-peo vaovao mitrandraka ny “zava-kanto sy siansan’ny fiasana miaraka” · Global Voices teny Malagasy
RV newsletter: Fandraketam-peo vaovao mitrandraka ny “zava-kanto sy siansan'ny fiasana miaraka”
Voadika ny 10 Avrily 2019 5:51 GMT
Fango hita amin'ny alalan'ny lisansa Creative Commons Attribution 4.0 International.
Fanamarihan'ny Rising Voices: Ny taratasim-baovaontsika mpivoaka indroa isam-bolana dia manome famintinana ireo lahatsoratra bilaogy vao haingana mikasika ny lafiny rehetra amin'ny fampiatiana nomerika, anisan'izany ny fidirana sy ny fandraisana fitaovana nomerika, ary koa ny fomba samihafa sy ny fidanadanana (opportunités) ho an'ny fiarahamonina mba handray anjara mavitrika amin'ny aterineto. Vakio eto raha hijery ireo fivoahana teo aloha amin'ity taratasim-baovao ity.
Vao haingana ny Creative Commons no nanomboka ny fandraketam-peony vaovao “Plays Well with Others (Milalao tsara miaraka amin'ny hafa)” izay mifantoka amin'ny “kanto sy siansan'ny fiasana miaraka.” Ampiantranoin'ny filoha tale jeneralin'ny Creative Commons, Ryan Merkley, ahitana tafatafa miaraka amin'ny solontena tsirairay izay mitaky fiarahamiasa ny fizarana tsirairay. Efa ao amin'ny aterineto ankehitriny ny fizarana roa voalohany ary ahitana an'i Katherine Maher, tale mpanatanteraka ao amin'ny Wikimedia Foundation sady mpanoratra-mpanao hatsikana, Anne Lane sy Wayne Federman, izay niasa tamin'ny fampisehoana tahaka ny Rick sy Morty.
Mazava ho azy, azo jerena amin'ny alalan'ny lisansa Creative Commons BY 4.0 ny votoatin'ilay fampisehoana sy ny mozikany misy lohahevitra, ary nalaina tamin'ny fitaovana voaaro amin'ny CC ny mozika sy ny feo.
BETSAKA KOKOA AVY AMIN'NY BILAOGY RISING VOICES
Amin'ity lohahevitra ity, tianay ianareo hihaona amin'ireo vahiny roa vao haingana tamin'ny tetikasanay mifandimby ao amin'ny Twitter mikasika ny fikatrohana nomerika ho an'ny fiteny afrikana (@DigiAfricanLang)! Misaotra an'i Adé?ínà Ay?ni (aka ?m? Yoòbá) nizara taminay ny asany ho an'ny fiteny Yoruba ary i Zaituni Njovu noho ny asany amin'ny famolavolana ny fiteny Swahili. Azafady vakio ny lahatsoratra Fanontaniana & Valiny raha te-hahafantatra bebe kokoa momba azy ireo sy ny asany!
Amin'ity lohahevitra ity, te-hampahafantatra anareo ireo mpandray vahiny- vahiny roa vao haingana ao amin'ny @ActLenguas – mpikatroka nomerika ho an'ny fiteny indizeny Israel Quic (Maya Tz'utujil avy any Goatemala) sy Leonardi Fernández (Wayuu avy any Venezoela). Ao amin'ny lahatsoratra mombamomba azy ireo, hahafantatra bebe kokoa momba azy ireo sy ny asan'izy ireo amin'ny famelombelomana sy fampiroboroboana ny tenindrazany ianao.
Mpandrindra tetikasa amin'ny tetikasa tovozina malalaka ve ianao? Mila fanohanana ara-bola kely ve ianao mba hanitatra ny tetikasanao amin'ny dingana manaraka? Ny Foibe Open Source, Digital Impact Alliance (DIAL) dia mandray fangatahana Fanampiana ara-bola Katalytika mba hanitarana ny fanohanany ireo tetikasa rindrambaiko tovozina malalaka izay mifantoka amin'ny hetsika ho an'ny maha-olona, ny fampandrosoana sy ny fandriampahalemana. Tsidiho azafady ny tranonkalan'izy ireo raha te-hijery ny antsipiriham-baovao. Fara-fandraisana fangatahana 15 aprily 2019 (12atoandro AOE / UTC) [H / T – Taratasim-baovao momba ny Tambajotram-piarahamonina an'ny APC]
Vehivavy mpanao gazety ve ianao izay nanolo-tena hamoaka ireo tantara tsy navoaka momba ny vehivavy sy ny ankizivavy manerantany? Mitady vatsy hanohanana anao amin'izany ezaka izany ve ianao? Misokatra ny fisoratana anarana amin'ny Fanampiana ara-bola momba ny tantaran'ny vehivavy karakarain'ny International Women's Media Foundation’s (IWMF), izay tohanan'ny The Secular Society! Fara-fandraisana: 21 Aprily 2019.
Miasa amin'ny sarimihetsika mahaleotena mifandraika amin'ny rariny ara-tsosialy, ny fampizakan-tena na fifanakalozana ara-kolontsaina? Natokana hampizaka-tena ireo taranaka mpilaza tantara nomerika hoavy manerantany, atolotry ny Filmmakers Without Borders (FWB) ny Vatsy Fanaovana Sarimihetsika mba hanohanana ireo tetikasa goavana avy amin'ireo mpamokatra horonantsary, na vaovao ireo na efa matihanina. Tsidiho azafady ny tranonkalan'izy ireo raha hijery ny antsipirihany. Fara-fandraisana: 1 Jona 2019 (fotoana asara)/1 Aogositra 2019 Gazetim-baovao momba ny Tambajotram-piarahamonina an'ny APC]
MIDANADANA/VATSIM-PIANARANA & VATSY
Nanitatra ny daty fara-fandraisana ho an'ny Vatsy Persephone Miel Fellowship ny Foibe Pulitzer, miaraka amin'ny Internews, izay natao hampizaka tena ireo matihanina amin'ny fampitam-baovao (ohatra, mpanao gazety, mpanoratra, mpaka sary, mpamokatra radio na mpilalao horonantsary) ary ireo freelancer avy any ivelan'i Etazonia, mba hanolotra tantara tsy dia be mpandre ho an'ny mpihaino iraisam-pirenena. Tsidiho ny tranonkalan'izy ireo raha hijery fanazavana. Fara-fandraisana: 15 aprily 2019.
Ny Oxford Media Policy Summer Institute dia mandray fangatahana amin'ny fandaharam-potoanany 2019, ary voafetra ny isan'ny mpanainga vonona. Programa mandritra ny roa herinandro ( 4-17 Aogositra) izany izay hihaonan'ireo mpandray anjara sy hifanakalozana hevitra momba ny fiantraikan'ny teknolojia, ny fampitam-baovao ary ny politika avy amin'ny fomba fijery ankapobeny sy marosehatra. Ny lohahevitra amin'ity taona ity dia: Teknolojia sy politikam-panaovan-dalàna. Fara-fandraisana: 20 aprily 2019 Taratasim-baovao momba ny Tambajotram-piarahamonina an'ny APC]
Amin'ny ezaka hanampiana ireo vondrom-piarahamonina mpikatroka mba handrakitra tsara ny hetsika ataon'izy ireo, ny fitantaran'izy ireo ary koa ny votoatin'izy ireo nomerika, ny Documenting the Now dia manolotra Atrikasa mikasika ny tahiry nomerika mifototra amin'ny fiarahamonina ho an'ny mpikatroka manerana an'i Etazonia. Misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny atrikasa amin'ny taona 2020. Fara-fandraisana: 3 Jolay 2019
VAKITENY, FIHAINOINA sy FIJERENA FANAMPINY ADDITIONAL READINGS, LISTENINGS, and VIEWINGS
JAMLAB Accelerator: 15 Minutes with Quote This Woman+ via jamlab (the Journalism and Media Lab)
Te-hahafantatra ny zava-mitranga ao amin'ny @ChickasawNation? Jereo azafady ny fizarana farany tamin'ny CNTV News (Season 10 • Episode 7)
Misorata anarana ao amin'ny Rising Voices Newsletter
Misaotra an'i Eddie Avila tamin'ny fanampiana amin'ny fanoratana ity taratasim-baovao ity